जापानमा किन बारम्बार भूकम्प जान्छ ? वैज्ञानिकले पत्ता लगाए नयाँ तथ्य — Sanchar Kendra
जापानमा किन बारम्बार भूकम्प जान्छ ? वैज्ञानिकले पत्ता लगाए नयाँ तथ्य
टोकियो । जापान भूकम्पीय दृष्टिले एकदमै जोखिम देश हो । केही वर्षको अन्तरालमा जापानीले बारम्बार भूकम्प महसुस गर्छन् । बारम्बार भूकम्प जानुमा वैज्ञानिकहरूले एउटा नयाँ तथ्य खुलासा गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार दक्षिणी जापानमा ठुलो भूकम्प जानुको कारण जमिनमुनि रहेका पहाड आकारका चट्टानका ठुला रास हुन सक्छन् । वैज्ञानिकहरूले दक्षिणी जापानको तटमुनि कुमानो प्लुटोन नामक संरचना फेला पारेका छन् ।
ठुला भूकम्पहरुबाट आउने टेक्टोनिक उर्जा यस वरपरको विभिन्न विन्दुहरूमा डाइर्भट हुने गरेको कुमानो प्लुटोनको ३ डी भिजुअलाइजेसनले खुलासा गरेको वैज्ञानिकहरुको भनाई छ ।
कहिले, कहाँ र कसरी ठुला भूकम्प जान्छन् भनेर ठ्याक्कै हामीले भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन । तर, हाम्रो नमुनालाई मोनिटरिङ डाटासँग मिलाउँदा हामी निकट भविष्यका प्रक्रियाहरू अनुमान सुरु गर्न सक्छौँ,’ जापान एजेन्सी फर म्यारिन अर्थ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका भूभौतिकविद् शुइची कोदाइरा भन्छन् । उनको भनाईलाई अस्टिन वेबसाइटमा युनिभर्सिटी अफ टेक्सासले उद्धृत गरेको छ ।
कुमारनो प्लुटनोको वास्तविक हद (क्षेत्र) लाई बुझ्न वैज्ञानिकहरूले २० वर्षदेखिको भूकम्पीय तथ्याङ्क जाँच गरेका थिए । सो कार्यका लागि सेस्मिक सेन्सर्सको जापान नेटवर्कबाट लाखौँ रेकर्डहरू समावेश गरिएको थियो ।
अहिलेसम्मकै ठुलो सेस्मिक डाटालाई विश्वविद्यालयको सुपर कम्प्युटर लोनस्टारलाई प्रदान गरिएको थियो । कुमानो प्लुटोन निकै घना र कठोर हुने र यसले भूकम्प गराउने टेक्टोनिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरु विश्वास गर्छन् ।